မန်စီးတီးနည်းပြဟောင်းနဲ့ အသံထွက်လာတဲ့ ယူနိုက်တက် ၊ အဖျားမိသွားတဲ့ မက်ဆီ ၊ တပွဲတည်း ဂိုး ၂၀ သွင်းတဲ့ အသင်းတို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ သတင်းတိုများ - xyznews.co
မန်စီးတီးနည်းပြဟောင်းနဲ့ အသံထွက်လာတဲ့ ယူနိုက်တက် ၊ အဖျားမိသွားတဲ့ မက်ဆီ ၊ တပွဲတည်း ဂိုး ၂၀ သွင်းတဲ့ အသင်းတို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ သတင်းတိုများ
PSG တိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ တနင်္လာနေ့ ညက ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲ အပြီးမှာ ဖျားနာ ခဲ့တာကြောင့် မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် ကို မပါဝင် ခဲ့ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
PSG ဟာ နိုက်စ် အသင်းနဲ့ ဒီည မှာ ကစားဖို့ ရှိနေပြီး ဒီပွဲ ကို မက်ဆီ လွဲဖို့ အလားအလား များနေပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ မန်စီးတီး အသင်းကို ကိုင်တွယ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ရယူ ပေးခဲ့ ဖူးတဲ့ လက်ရှိ အီတလီ နည်းပြ ရော်ဘတ်တို မန်စီနီ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား လာတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီနီ ဟာ အီတလီ အသင်း ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ မအောင်ခဲ့ပါက နည်းပြ နေရာ ကနေ နှုတ်ထွက်ဖို့ ရှိနေတယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ယာယီ နည်းပြ ဖြစ်လာတော့မယ့် ရပ်ဖ် ရန်းနစ် ဟာ ဂျာမန် ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် မှာ ကစားနေတဲ့ မာလီ ကွင်းလယ်လူ အမာဒူ ဟိုင်ဒရာ ကို ဇန်နဝါရီမှာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အမျိုးသမီး လက်ရွေးစင် ဘောလုံး အသင်းဟာ မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲမှာ လတ်ဗီးယား အသင်းကို ဂိုး ၂၀ သွင်းယူကာ အနိုင်ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ သူမ တို့ အသင်းအတွက် သမိုင်း မှတ်တိုင်သစ် ရေးထိုး နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် တုန်းက ၁၃-၀ နဲ့ ရရှိ ထားတဲ့ စံချိန်ကို ၂၀-၀ နဲ့ ကျော်ဖြတ် ကာ မှတ်တမ်းသစ် စိုက်ထူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲမှာ ဟက်ထရစ် သွင်းသူ ၃ ဦး ၊ ၄ ဂိုးသွင်းသူ ၁ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ဟက်ထရစ်ရှင် အီလန် ဝှိုက် ကတော့ အင်္ဂလန် အမျိုးသမီး ဘောလုံးသမိုင်းရဲ့ ဂိုးသွင်း အများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် တိုက်စစ်သမားကြီး သောမတ်စ် မူလာ ကတော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရွှေဘောလုံး ဆုကို အသင်းဖော် လီဝန်ဒေါ့စကီး မရရှိ ခဲ့မှုဟာ ကံမကောင်းတဲ့ အရာ တခုလို့ ပြောဆို သတ်မှတ် ခဲ့ပြီး သူ့အနေနဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို ကူညီ အားပေး သွားမယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ကီဗင် ကင့်ဘဲလ် ကတော့ လိုင်လီ မှာ ခြေစွမ်းပြ နေတဲ့ ပေါ်တူဂီ ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ရီနာတို ဆန်းချက် ကို အာဆင်နယ် တို့ ခေါ်ယူ သင့်ကြောင်း အကြံပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အသင်းကတော့ အသင်းအတွက် တတိယမြောက် ဂိုးနည်းပြ အဖြစ် ဘရာဇီး ဂန္ထဝင်ကြီး တာဖာရယ် ကို ခေါ်ယူ လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ လီဗာပူး နံပါတ် ၁ ဂိုးသမား အဲလစ်ဆွန် ဘက်ကာ ဟာ တာဖာရယ် ကို ခေါ်ယူပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့တာလို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
တာဖာရယ် ဟာ ဘရာဇီး အတွက် ပွဲပေါင်း ၁၀၁ ပွဲ ကစားပေးထားပြီး ၁၉၉၄ ကမ္ဘာ့ဖလား အပါအဝင် ကိုပါ အမေရိက ဖလား ၂ ခု ကိုလည်း ရယူထားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား ဂျက် ဂရီလစ်ရှ် ဟာ တနေ့မှာ သူ့ကို စင်တင် ပေးခဲ့တဲ့ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းထံ ပြန်သွား ကစားဖို့ စိတ်ဆန္ဒ ရှိထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စီးတီး နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ ကတော့ ဂရီလစ်ရှ် ကို တကိုယ်ကောင်း နည်းနည်း ပိုဆန်တတ်ဖို့ လိုအပ် နေသေးတယ်လို့ သင်ပြ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ နယူးကာဆယ် နဲ့ ဝက်ဖိုဒ့် တို့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျကာ လိဒ် က ပဲလေ့စ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ရာဖင်ဟာ ရဲ့ ၉၀+၃ သွင်းဂိုးတလုံးတည်းနဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ကတော့ ပွဲစဉ် ၁၄ ရောက်သည်အထိ နိုင်ပွဲ လုံး၀ မရရှိသေးပါဘူး ။
နယူးကာဆယ် ဂန္ထဝင်ကြီး အလန်ရှီးယား ကတော့ လာမယ့်ဇန်နဝါရီ ဈေးကွက်မှာ နယူးကာဆယ် ဆီကို ကစားသမားကောင်းတွေ လာဖို့ အလားအလာ နည်းပါးဦးမယ် လို့ ခန့်မှန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ရူဒီဂါ ကို ခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အကောင်းဘက်နေ ရှုမြင်ထားတဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ်
Next Article ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ပေါ်တူဂီ ကစားသမားကို ခေါ်ယူသင့်ကြောင်း အာဆင်နယ်အသင်းထံ အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တဲ့ ကမ်းဘဲလ်